Ubisoft yaive nemapurojekiti akati wandei pasi pebhanhire ravo gore rino. Isu takave neimwe yekupinda mune ese Ekutarisa Imbwa, Assassin's Chitendero pamwe neFar Cry franchise gore rino. Ndokunge, kana usiri kukanganwa kuti Muchinda wePersia: Sands of Time remake uye Immortals: Fenyx Kukwira kuriwo mumabasa. COVID-19 yakanga yakanganisa kugadzirwa kwezvinhu zvikuru zvema software (kusanganisira… [Verenga zvakawanda ...] nezve Far Cry 6 uye Rainbow Six Quarantine Yakanonoka Ku2021
Kunze kwekuwedzera runyorwa rukuru rwezvinhu, Microsoft iri kushanda zvakare mukuvandudza kutaridzika uye kunzwa kweiyo Microsoft Teams app ye Windows 10. Iyo kambani yakagadzirisa iyo UI yewebhu vhezheni yeapp neine nyowani Dhizaini dhizaini kune vanoedza, neshanduro yekupedzisira inotarisirwa kuburitswa muna Zvita. Zvese zvichienda mushe mutengi wemuno achave nehumwe hwakafanana muna 2021. Iyo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Matimu eMicrosoft anowana kubatwa kweFluent Dhizaini
Xiaomi Mi 10T Pro ongororo: Iyo zingy mureza ruzivo
Mhando dzeSmartphone dzinofungidzirwa nezwi rekuti "mureza". Tungamira kune vezvenhau uye pane imwe nharembozha inoshambadzira nhare nyowani "yemureza" nemitengo isingadaviriki yakaderera. Snapdragon 865, 90Hz yekumutsidzira rate ratidziro, quad-makamera, kuchaja nekukasira - izvi zvakajairika mu2020 zvekuti ndinopedzisira ndashama pamashizha emazuva ano. Asi zvadaro, nhare idzi dzinodzoka ne… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xiaomi Mi 10T Pro ongororo: Iyo zingy mureza ruzivo
Windows 10 inogona kunge iri kuwana macOS-senge tsvaga chinongedzo chimiro
PaMacOS, iwe unogona kuwedzera iyo inotora kuti zvive nyore kuona nekungozunza mbeva yako. Windows 10 zvakare inobvumira vashandisi kuti vawane iyo inotora pane desktop nekudzvanya iyo Ctrl kiyi, iyo iwe yaunogona kugonesa uye kudzima kubva kune yekuwanika marongero egonzo. Zvichienderana nemhinduro kubva kune vanofarira tekinoroji, Microsoft ikozvino iri kuongorora chinhu chitsva chePowerToys chichagonesa… [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows 10 inogona kunge iri kuwana macOS-senge tsvaga chinongedzo chimiro
Pinda muMweya wePumpkin Mwaka neiyo Halloween-themed Windows 10 Wallpaper rongedza
Kupemberera kusvika kweKwindla unogona kurodha seti yemahara Windows 10 madingindira kuMicrosoft Store. Yakatumidzwa Pumpkin Mwaka, iyo tsananguro yeakakwira mhando Wallpaper Wallpaper inoverengwa seinotevera: Inguva yenhanga. Ivo vanopenya, vanotswinya, uye vanounza kunakidzwa. Tora gumi nematanhatu mafaro ematsutso mune ino yemahara Windows theme yakaiswa. Garari Mushure mekurodha pasi… [Verenga zvakawanda ...] nezve Pinda muPumpkin Mwaka wemweya neHalloween-themed Windows 10 Wallpaper rongedza
Enda kune peji 206